11 Responses to “နှစ်သိမ့်ပေးသူ”
Hey dun forget the one who console ya everytime........ :) :) :)
ဒီလို အချိန်မှာ ဒီလို အပြစ်တင်နေရမဲ့ အချိန်မှ မဟုတ်တာ.။
သို့သော် လူတွေက သတိမထားမိတတ်ကြဘူး။
This story give me something lessons. Thanks so much.
ယွန်းက 10တန်းကျတော့ မေမေဆူလို့ အိမ်ကနေ ထွက်ပြေးဖို့ လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်.. အဲဒီတုန်းကသာ ဒီစာလေးတွေ့မိရင် မေမေ့ကို ပြမိမှာ
အားပေးနှစ်သိမ့်လို့ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေဖြစ်မလာနိုင်ပဲ.... ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှသာ ပြန်ပြင်မရနိုင်တဲ့ ကျရှုံးမှုတွေကိုရင်ဆိုင်ကြရတတ်တာမျိုးပါဗျာနော်....။
အပြစ်တင်မှာပဲ...မရဘူး.. တင်ကိုတင်ရမှ ကျေနပ်မှာ။ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် လူအများစုရဲ့ ခေါင်းထဲမှာ အဲဒီလို အရင်ပေါ်လာတတ်တယ်။ အပြစ်တင်တယ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်အတွက် မွေးရာပါ ပါလာတဲ့ self defense တစ်မျိုးဆိုရင် မမှားပါဘူး။ ဥပမာ။ ။မိဘတစ်ယောက်က စာမေးပွဲကျတဲ့သားကို နှစ်ပြားမတန်အောင် ပြောတယ်ဆိုတာက သူ့အမှားကို လူမသိအောင် ဖုံးတာနဲ့ အတူတူပဲ။ လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းဒီလိုပဲ။ အလုပ်မအောင်မြင်ရင် အထက်လူကြီးတွေက အောက်က ၀န်ထမ်းတွေ အသုံးမကျလို့ လို့ အကြောင်းပြတတ်ကြတယ်။ အမှန်က သူ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှု လိုအပ်တာလဲ ပါမှာပေါ့။ သူတပါးကို အပြစ်တင်လိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အပြစ်မရှိဘူးလို့ စိတ်က အလိုလို ယူဆလိုက်တယ်။ စိတ်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့။ လူတွေက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် သူတပါးကို အပြစ်တင်ခြင်းကို အသုံးပြုကြတယ်။ ဒါကို ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေက သိပ်မသိကြဘူး။ ပညာတတ်တာ မတတ်တာနဲ့ မဆိုင်ဘူးထင်တယ်။ သတိနဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းအား အပေါ်မူတည်လိမ့်မယ်။
အမ အ၇မ်းကောင်းပါတယ် ကျွန်တော်လာအားပေးတယ်နော်
အတုယူစရာ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါ။
အရမ်းကောင်းပါတယ် ။ လူကြီးတွေသာအဲဒီလိုသဘောထားနိုင်ရင်အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့